» Faah Faahin: Weeraro lagu qaaday Suuqa Bakaaraha iyo ciidamada marayay Jidka Warshadaha
Faah Faahin: Weeraro lagu qaaday Suuqa Bakaaraha iyo ciidamada marayay Jidka Warshadaha
January 4, 2013 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareWararka naga soo gaaraya Suuqa Baraakaha ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay weerar gaystay qasaarooyin kala duwan iyadoona weerarkas ay fah faahin kasoo baxayso.
Labo Nin oo hubaysan ayaa weerar qarax ah ku qaaday ciidamo katirsan kuwa nabad sugida dowlada, iyadoona qaraxaas ay waxyeelo kasoo gaartay ciidamada dowlada.
Hal askari ayaa weerarkas ku dhintay halka ilaa sedex kalana dhaaawacyo soo gaareen sida uu sheegay qof kamid ah waardiyasha Hantida Suuqa Bakaaraha.
Howlgallo ay ciidamada sameeyeen ayaa lasoo sheegayaa in ciidamada dowlada ay gacanta kusoo dhigeen labadii ruux ee weerarkaas ka danbaysay.
Dhanka kale ciidamo katirsan kuwa dowlada ayaa qarax lagula eegtay wadada warshadaha gaar ahaan halka loo yaqaan Xero Jarmal.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamadan la weeraray xili ay gaari nooca qooqanka ah la socdeen, waxaana la maqlayay rasaas ay isweydaarsanayeen ciidamada la weeraray iyo kooxdii weerarka qaadat.
Lama oga qasaaraha ka dhashay weerarkas hase ahaatee waxaa uu falkas qeyb ka yahay weeraro had iyo jeer ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
2 Responses to Faah Faahin: Weeraro lagu qaaday Suuqa Bakaaraha iyo ciidamada marayay Jidka Warshadaha
Cabaas yare says:	January 4, 2013 at 01:14	Walal aniga waxan dhihi lahaay babo latuuray uma hakaneso dowlaada Ee hakudalina ismiidamin ba hakii waye ilmahan lasiray dowladda waxa lehay guul guul aamiiiiiiiin allah
Reply	soomaliya ha noolaato says:	January 4, 2013 at 13:37	cabaas yare sxb waxa tahay nin muwadin dhab ah wana kugu racsanahay fikradas inshallah mar dhow alshayadiin walaga cirib tirayaa somaliya